एक सामाजिक मिडिया श्रोतालाई मोहित गर्न7अद्भुत सामग्री विचारहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक 15 सक्छ, 2021 12 सक्छ, 2021 उदय ट्या tank्क ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक
इन्फोग्राफिक्स सिर्जना गर्नका लागि सजिलो प्रकारको मिडिया सामग्री हो।
चाखलाग्दो तथ्यहरूको बारेमा पोष्ट गर्नुहोस्।
केवल निश्चित गर्नुहोस् कि यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको दर्शकलाई रोक्न र सोच्नको लागि कारण दिन्छ।
तपाईलाई यहाँ के ल्याइएको? मलाई भनिएको थियो तपाईं सोशल मिडिया सामग्री विचारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, मेरो टाउकोमा ती समूहहरू छन्। किन अरु लाग्छ कि उनीहरुले मलाई इन्स्टा-प्रभु भन्छन्?
अहिले जुन दिमागमा आउँदछ पहिले त्यो इन्फोग्राफिक्स हो। कलाको ती राम्रा साना कामहरू सोशल मिडियामा अन्य प्रकारको सामग्री भन्दा 3x.० अधिक सेयरहरू प्राप्त गर्न रिपोर्ट गरिएको छ।
संयोगवश, तिनीहरू पनि सिर्जना गर्न सबैभन्दा सजीलो सामाजिक मिडिया सामग्री हुन।
एउटालाई पनि विचार वा केही पनि मंथनको आवश्यकता पर्दैन। तपाईं भर्खरै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ इन्फोग्राफिक सफ्टवेयर भेन्गेज जस्तै गर्न को लागी सर्वश्रेष्ठ इन्फोग्राफिक्स एक मिनेट भन्दा कममा मैले तपाईसँग बाँकी बाँड्नु अघि, तपाईले कति तिर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न म चाहान्छु।
त्यो सुनेर छक्क परे?
याह – तपाईका अनुयायीहरूलाई मोहित गर्नको लागि best उत्तम सामाजिक मिडिया सामग्री विचारहरू।
एक सामाजिक मिडिया दर्शकहरु मोहित गर्न अद्भुत सामग्री विचारहरु
मलाई भन, के तपाईले त्यो महसुस गर्नुभयो? के त्यो परिचय तपाईं संग गुन्जेल? यदि कसैले ट्विटरमा तपाईंको खुट्टा त्यस्तै तान्यो भने, के तपाईं ड्रप गर्नुहुन्छ?
त्यो मेरो # 1 सामाजिक मिडिया सामग्री विचार हो। म यसलाई PULLING PRANKS भन्दछु।
हालसालै मेरा ट्वीटर साथीहरूमा मैले खिचेको अर्कोलाई हेर्नुहोस्।
मैले यो पोस्ट गरें।
त्यसो भएपछि मैले यसलाई निम्न अनुसार गरिन:
पागल, सही? LOL, त्यो मात्र म हो - तपाईंको मित्रवत ट्विटर-छिमेकी
व्यक्तिलाई प्रंक गर्न धेरै अरब तरीका छन्। यहाँसम्म कि व्यवसायहरूले सामाजिक मिडियामा आफ्ना ग्राहकहरूलाई घोर्याउँछन्।
कसरी तपाइँका अनुयायीहरूलाई प्रान्क गर्ने भनेर सोच्न सक्नुहुन्न?
धिक्कार, तपाईं बृहस्पतिबाट हो?
जे भए पनि, गुगलमा पुग्नुहोस्। तपाईं उसबाट केही शरारत विचारहरू चोर्न सक्नुहुन्छ।
ठीक छ, हामी अन्य मनमोहक सामाजिक मिडिया सामग्री विचारहरू हेर्नुहोस्।
२) मान्छेको आँखामा ऊन तान्नुहोस्
तपाईंको इन्स्टाग्राम पोस्टहरूको साथ व्यक्तिलाई मोहित गर्न चाहनुहुन्छ? मान्छेहरू जब उनीहरूले ट्वीटरमा तपाईंको ट्वीट देख्छन् तब तिनीहरूमा वेभ गरिएको चाहिन्छ? तपाईंको फेसबुक साथीहरू तपाईंको पोस्ट स्क्रिनशट गर्न र उनीहरूको टाइमलाइनमा पोष्ट गर्न चाहनुहुन्छ?
ऊन तिनीहरूको आँखाबाट टाढा तान्नुहोस्।
हुनसक्छ यो बुझ्नलाई तपाईलाई समेट्नको लागि अति रूपात्मक हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो, केहि थाहा नभएको कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन।
चाखलाग्दो तथ्यहरूको बारेमा पोष्ट गर्नुहोस्
नयाँ उद्योग-सम्बन्धित तथ्या .्कहरू प्रकट गर्नुहोस्
एक जीवन भर मिथ्या डेबंक
मानिसहरूलाई नयाँ चीजहरू सिकाउनुहोस्
नयाँ उद्धरणको साथ तिनीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस्
सेलिब्रेटीहरू, जीवन, विशिष्ट उद्योगहरू, आदि को बारे मा कम ज्ञात तथ्य प्रस्ताव गर्नुहोस्।
ठूलो र ठूलो, तपाइँको श्रोतालाई नहुन सक्छ त्यस्तो ज्ञान ल्याउनुहोस्।
हेर्नुहोस् IG मा केहि खाताहरूले यो कसरी गर्‍यो।
मलाई मेरो व्हाट्सएप स्थितिमा यो पुन: पोस्ट गर्ने सम्झना छ
अवश्य पनि, तपाइँ सजिलैसँग तपाइँको व्हाट्सएप स्थितिमा यस प्रकारको सामग्री टाइप गर्न सक्नुहुन्छ वा ट्विटरमा शब्दहरूको रूपमा यसलाई ट्वीट गर्न सक्नुहुन्छ।
तर छवि दृश्यहरू, इन्फोग्राफिक्स, मेम्स, र भिडियोहरू जस्तै यो दृश्य ढाँचामा राख्न यो सधैं उत्तम हुन्छ।
यस तरिकाले, यसले सजिलैसँग लोगोंको ध्यान खिच्नेछ र तिनीहरूसँग प्रतिध्वनित हुनेछ।
)) ट्यूटोरियल देखाउनुहोस्: व्यक्तिलाई सिकाउनुहोस्
त्यहाँ मार्गनिर्देशकहरूले यसलाई ईन्टरनेटमा कुचल्नुको एउटा कारण छ।
एक सामाजिक मिडिया श्रोताहरूलाई मोहित गर्न, एक ट्यूटोरियल भिडियो शिक्षण सामग्री पोष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईं सोच्नुहुन्छ कि उनीहरू सिक्न चाहन्छन्।
यदि तपाईं एक फॅशनिस्टा हुनुहुन्छ भने, यो जुत्ता फीता गर्नका लागि विभिन्न तरिकाहरूमा ट्यूटोरियल भिडियो हुन सक्छ।
फिटनेस पृष्ठको लागि, व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कसरत शैली सिकाउने भिडियोहरू बनाउनुहोस्।
एक सुन्दरता पृष्ठ को लागी, यो कसरी ग्रुम, आकार, र भौहें राख्ने भन्ने बारे ट्यूटोरियल भिडियो हुन सक्छ।
एक व्यवसाय पृष्ठ को लागी, यो घर मा तपाइँको उत्पादनहरु वा DIY परियोजनाहरु कसरी प्रयोग गर्ने बारे मा एक ट्यूटोरियल हुन सक्छ।
तपाईले यो अवधारणा काममा निम्न आईजी पृष्ठहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
@ फूडमिनिमिस्ट: दर्शकहरूलाई स्वादिष्ट व्यंजनहरू सिकाउँछ
@thechriscoulson: कसरी विभिन्न कसरत स्टन्ट तान्ने अनुयायीहरू देखाउँदछ
@batchninecoffee: कफि फिल्टरको बारेमा मानिसहरूलाई सिकाउँछ
)) एउटा प्रतियोगिता चलाउनुहोस्
राम्रो ओल 'प्रतियोगिता भन्दा दर्शकहरूलाई मोहित गर्ने राम्रो तरीका के हो? प्रतियोगिता, साथै सस्ता (हम्म्म्, स्वादिष्ट भाग) को साथ, सामाजिक मिडियामा सबैभन्दा मनपर्ने सामग्री हो।
एकातिर, तिनीहरू संलग्न छन्। र अर्को तर्फ, तिनीहरू पुरस्कृत छन्। यी कारणहरूले गर्दा, मानिसहरू भाग लिनका लागि भेला हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यदि उनीहरूले जितेनन् पनि, तिनीहरू बाहिर आउँनेछन् राम्रो समयको साथ।
टेलविन्डका अनुसार प्रतियोगिताहरू लामो माईलमा इन्स्टाग्राममा सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन हुने सामग्री हुन्। त्यहाँ धेरै मिडिया मिडिया प्रतियोगिता विचारहरू छन् जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, ट्याग-ए-मित्रबाट "लाइक र / वा टिप्पणी गर्न" जीतको प्रकारको।
स्पष्ट रूपमा, म सम्भवत यस पोष्टमा ती सबैलाई सूचीबद्ध गर्न सक्दिन। तर यदि तपाईं प्रतिस्पर्धा दिन को लागी गम्भीर हुनुहुन्छ, तपाईंले उत्तम यो टुक्रा जाँच गर्नु पर्छ सामाजिक मिडिया प्रतियोगिता विचारहरु.
अन्तमा, प्रतियोगिताहरू इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्धित छैनन्। व्यक्तिहरूले पिन्टेरेस्ट, टिकटोक, ट्वीटर, र अन्यमा प्रतियोगिताहरू चलाउँछन्। आफैलाई सीमित नगर्नुहोस्।
)) एक उद्योग नेता वा प्रसिद्ध व्यक्ति होस्ट गर्नुहोस्
सुझावहरू र अन्तरदृष्टि साझेदारी गर्न तपाईंको दर्शकहरूसँग उद्योग विशेषज्ञहरू र लोकप्रिय व्यक्तिहरू ल्याउने दर्शकहरूको ध्यान खिच्ने उत्तम तरिका हो।
उदाहरण को लागी, मानौं तपाईं एक डिजिटल मार्केटर हुनुहुन्छ।
तपाई जस्तो ब्रायन डीन वा नील पटेल जस्तै कसैसँग सत्र होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै अवधारणाहरू जस्तो छलफल कसरी मनमोहक उत्पादन वर्णन लेख्न, नयाँ एसईओ प्रवृत्ति, र सामान।
व्यक्तिहरू उनीहरूका मनपर्ने व्यक्तित्वहरू बोलेको हेर्नका लागि तत्पर छन्। यसले तिनीहरूलाई चीजहरू पत्ता लगाउने अवसर दिन्छ जुन उनीहरूलाई त्यस व्यक्तिको वा तिनीहरूको उद्योगको बारेमा सायद थाहा थिएन।
यो अझ राम्रो छ यदि तपाइँ उद्योगमा एक ठूलो नाम छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नयाँ अनुयायीहरु मा आकर्षित गर्दछ र अधिक संलग्नता बनाउँछ।
फरक पर्दैन यदि तपाईं उही स्थानमा तपाईंको पाहुना जस्तो हुनुहुन्न। तपाईं जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनुप्रयोगहरू स्काइप जस्ता भिडियो साक्षात्कार रेकर्ड गर्न र तिनीहरूलाई सोशल मिडियामा प्रकाशित गर्न।
एक लोकप्रिय ब्लगर, ठूलो टिभी व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ, वा सेलिब्रेटीको साथ नेटवर्क गर्न सक्नुहुन्न? समस्या छैन।
तपाईं सँधै केहि कम कुञ्जी हस्तीहरू जस्तै स्थानीय उद्यमी, कलाकार, प्राध्यापक, विशेषज्ञ, इत्यादिसँग प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
)) एक प्रवृत्ति मा जानुहोस्
एलेन डिजेनेर्सले पुतलाको चुनौतीको सामना गर्दा कसलाई सम्झेको छ?
केही फरक पर्दैन।
मेरो कुरा यो हो कि तपाईं पनि श्रोताको आकर्षण गर्न रुढीहरूमा हाम फाल्न सक्नुहुन्छ।
सामाजिक मिडिया प्रचलनहरूको सौन्दर्य सधैं त्यहाँ वरिपरि केहि जाने छ।
बोतल क्याप चुनौती, सिल्हूट चुनौती, फेसबुक फेस एप्लिकेसन चुनौती, वा टिकटोकको च्यातृ नृत्य चुनौती सम्झनुहोस्?
अवश्य पनि, तपाइँ अपराधी सिल्हूट चुनौती जस्ता, तपाइँको ब्रान्डलाई हानि पुर्‍याउने प्रवृत्तिहरूमा आशा लगाउनबाट बच्न चाहानुहुन्छ।
मलाई याद छ कि मेरा धेरै साथीहरूले टिकटोक र ट्विटरमा टन्न नयाँ अनुयायीहरू पाए जुन त्यो पागल - as-f ** k गाडीमा जम्पिंगको लागि थियो।
)) ब्रेन टीज़र प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
तपाईको दिमागका टिजरहरू हास्यास्पद हुन सक्छ वा छैन। यो तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित हुन सक्छ वा छैन।
एक पटकको कुरा हो, मैले मेरो आईजी र ट्विटरमा तल छवि पोष्ट गरें र धेरै स engage्लग्नता पाएँ।
उत्तर: ती सबैको जन्मदिन समान छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो फेसबुक फिडबाट स्क्रोल गर्दै हुनुहुन्छ र त्यस्तै कुनै चीजमा ठोकरिएको छ। म शर्त गर्दछु कि तपाइँ बस्नुहुन्छ र उत्तर विचार गर्नुहुन्छ।
जबसम्म तपाईं फुटबललाई घृणा गर्नुहुन्छ (billion अरब मानिस खेल प्रेम गर्छन्, किन तपाईं हैन?)।
तल केहि अद्भुत दिमाग टीज़र प्रश्नहरू छन् जुन तपाइँ आफ्नो ट्विटर, फेसबुक आईजी, व्हाट्सएप, आदि मा प्रशंसक वाह गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
फोटो क्रेडिट: सबै प्रो बाबा
सांप्रदायिक समाचार सामग्री विचारहरु सामाजिक मिडिया सामग्री सामाजिक मिडिया सल्लाह
उदय ट्या tank्क
उदय ट्या tank्क एक धारावाहिक उद्यमी र सामग्री मार्केटिंग नेता हो।